झापामा तीन स्थानीय तहमा मत गणना स्थगित,निर्वाचन अधिकृत जिल्ला झिकाइयो | रेडियो झापा 100.7 MHz.
रेडियो झापा 100.7 MHz. मंगलबार, जेठ ०३, २०७९ १०:३०:४४
झापाका शिवसताक्षी नगरपालिका, गौरीगन्ज र कमल गाउँपालिका गरी तीन ठाउँमा मतगणना रोकिएको छ । गठबन्धन दल र एमालेबीच गणनाका विषयमा विवाद भएपछि मतगणना रोकिएको हो ।
गौरीगन्ज गाउँपालिकामा खसेको मतको मुचुल्का र गणना गर्दा मतपेटिकामा भएको मतपत्रमा फरक आएपछि गणना अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हो । सोमबार सर्वदलीय बैठकबाट सहमतिको प्रयास गरिए पनि सहमति हुन नसकेपछि गणना स्थगित भएको गौरीगन्जका सहायक निर्वाचन अधिकृत रामचन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । ‘मतपत्र सुरक्षित गर्न सबै दललाई राखेर सिल गरेका छौँ । तत्काल गणना हुने अवस्था छैन । सोमबारको सर्वदलीय बैठकले पनि कुरा मिलेन,’ उनले भने, ‘अब मंगलबार पनि सर्वदलीय बैठक राखेर सहमतिको प्रयास गरिनेछ ।’
यस्तै, कमल गाउँपालिकामा सोमबार रातिदेखि मतगणना स्थगित भएको छ । वडा नम्बर ४ को मतगणना हुँदै गर्दा कम्प्युटर अपरेटरले एमालेको मत बढाए। जोडेको भन्दै गठबन्धन दलले विरोध गरेपछि मतगणना स्थगित भएको हो । गणनास्थललाई सिल गरिएको छ । गठबन्धनमा आबद्ध दलले पुनः मतगणनाको माग राखेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका हु्कुमसिंह राई अग्रता लिइरहेका छन् ।
शिवसताक्षी नगरपालिकामा पनि आइतबार रातिदेखि मतगणना स्थगित भएको छ । वडा नम्बर १ को परिणाम सार्वजनिकपछि मतदानको दिन बनाइएको मुचुल्का र गणनामा भएको मतपत्रको संख्यामा फरक आएपछि माओवादी केन्द्रसहित केही दलले आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार राति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय परिसरमा नाराबाजीसमेत भएको थियो । वडा नम्बर १ मा एमालेका लक्ष्मीप्रसाद चेम्जोङ विजयी भइसकेका छन् । तर, निर्वाचनमा तीन हजार ८२ मत खसेको मुचुल्का भए पनि गणनाको समयमा तीन हजार २८ मत मात्र गणना भएको भन्दै विरोध भएको थियो । दलहरूको विरोधपछि शिवसताक्षीमा निर्वाचन अधिकृतलाई फिर्ता बोलाइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका प्रमुख तुलसीकुमार नेपालले बताए । सोमबार रातिसम्म वार्ता भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेन ।